नबिल बैंकको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कमायो साढे ४ अर्ब बढी नाफा – Sodhpatra
नबिल बैंकको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कमायो साढे ४ अर्ब बढी नाफा
२ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन
प्रकाशित : ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०८:५४ August 16, 2021
काठमाडौं: नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकले अघिल्लो वर्षभन्दा ३० प्रतिशत बढी खुद नाफा गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष रू. ३ अर्ब ४६ करोड ३२ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको बैंकले यस वर्ष रू. ४ अर्ब ५० करोड ४४ लाखभन्दा बढी यो नाफा गरेको हो । अघिल्लो वर्षभन्दा २६ दशमलव ३५ प्रतिशत बढी सञ्चालन नाफा गरेकाले पनि बैंकको नाफामा वृद्धि भएको हो ।
अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष बैंकको इम्पेरमेण्ट चार्ज पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ८५ करोड ६७ लाखभन्दा बढी भएको इम्पेरमेण्ट चार्ज गत वर्ष रू. ६५ करोड ९९ लाख भन्दा बढी मात्र भएको हो ।
गत चौथो त्रैमाससम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा अघिल्लो वर्षभन्दा ३६ दशमलव २९ प्रतिशत बढी रू. ४ अर्ब १४ करोड ६२ लाखभन्दा बढी छ । ३३ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गरे पश्चात बैंकको चुक्तापूँजी रू. १३ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख ५१ हजार पुगेको छ ।
यो अवधिसम्म बैंकको जगेडा कोष रकम शेयर प्रिमियम र रिटेन्ड अर्निङ सहित रू. १९ अर्ब ४८ करोड ३७ लाख कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष बैंकको जगेडा कोष रकम २३ दशमलव ६४ प्रतिशत वृद्धि भएको हो ।
गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा १७ दशमलव १२ प्रतिशत बढी रू. २ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड ८० लाखभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ३३ दशमलव ८१ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब ९८ अर्ब १० करोड ७३ लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात गत वर्ष शून्य दशमलव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३२ दशमलव ५४ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २४० दशमलव ७३ छ । यस अवधिसम्म बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ४० दशमलव ६९ गुणा छ ।
सुदूरपश्चिमका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’आह्वान
गभर्नर अधिकारी आजदेखि नियमित काममा फर्किँदै
करोड लगानीमा गोदावरी ८ स्याउले बजारमा साथी मार्टको नयाँ शाखा सञ्चालन
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य : पेट्रोल १६० रुपैयाँ पुग्यो, ग्यासको कति ?
मेरो श्रृंगार धनगढीको शाखा मोति चोकमा पनि (भिडियो सहित)
चिकेन स्टेसन बुद्ध चोकले भित्र्यायो धनगढिमै पहिलो पटक नयाँ वर्षमा भारी छुट सहित खानाका परिकार
१० औं ‘ग्लोबल मनी विक’ २०२२ अन्तर्गत धनगढीमा माछापुच्छे बैंकको वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम